Fitsoahana loza :: Nitolo-batana ilay mpamily kamiao nahafaty olona • AoRaha
Fitsoahana loza Nitolo-batana ilay mpamily kamiao nahafaty olona
Fantatra fa tonga nitolo-batana teny amin’ny biraon’ny Polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana (BAC), etsy Tsaralalàna, tamin’ny zoma lasa teo, ny mpamilin’ny kamiao nahafaty olona iray teny amin’ny Fasan’ny karàna Anosizato, tamin’ny alin’ny alarobia 7 aogositra. Notazonina natao famotorana avy hatrany izy.
Tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany alina no nitrangan’io lozam-pifamoivoizana teo amin’ny Fasan’ny karàna io. Tonga teny an-toerana nanao ny fizahana ny polisy, fotoana fohy taorian’izay. Voatsindry tao ambanin’ny sarety maromaro voadona ny vatana mangatsiakan’ny lehilahy iray. Tsy tratra teo kosa ny fiara nanao loza.
Niroso tamin’ny fikarohana ny mpitandro filaminana. Natao ny fanangonam-baovao rehetra momba ny fiara. Roa andro taorian’izay, nanatona teny amin’ny biraon’ny polisin’ny BAC ny lehilahy iray, 27 taona, milaza ho mpamilin’ilay kamiao.
«Nohenoina avy hatrany ny fitantarany. Milaza ho nifanena tampoka tamina fiara iray izy ka tsy nahatazona ny familiana. Nifatratra tamin’ny sarety miisa enina nipetraka teo amoron-dalana ny fiarabe nentiny. Nandositra izy avy eo», hoy ny mpanao famotorana.
Tovolahy mpiambina sy mpitarika sarety ilay namoy ny ainy. Natory tao ambanin’ny sarety izy, tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza ka voatsindry tao.
Famongorana ny fakana an-keriny :: Hanaovana fisy manokana ireo olon-dratsy rehetra